Ikhaya / Blog / Yenza isicwangciso sokuhombisa ngeSink yokuhlambela ngeeBhafu
2021 / 09 / 27 uhleloBlog 561 0
Umbhobho wokuhlambela yenye yeendlela ezilungileyo zokuba ugqibezele ukubonakala kwendlu yangasese okanye ibhafu kunye neshawari. Itekhnoloji yetampu yokuntywila yokuhlambela ihambele phambili kakhulu, enokukuvumela ukuba ulawule ngcono amanzi kwaye ikunike ukuthembeka okuphezulu. Ezinye iimpompo zinomsebenzi wokulawula ubushushu onokuthi uhlengahlengise ukunceda ukukhusela i-scalds ebangelwa ngamanzi ashushu kakhulu - oku kubizwa ngokuba yimpompo anti scald function. Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu ukuba ziqwalaselwe ngumgangatho wezinto ezisetyenziswa ngabavelisi ekuphuhliseni oompompo. Olona khetho lufanelekileyo kukusebenzisa ubhedu oluqinileyo okanye isinyithi esenziwe ngesinyithi esifanelekileyo, esinceda ukukhusela umhlwa. Ungasoloko ufumana itepu encinci yokuhlambela, kodwa ekuhambeni kwexesha, ukonga akuyi kunyuka, kuba uya kuba nenkonzo emfutshane yompompo kwigumbi lokuhlambela, kwaye kusenokubakho iingxaki zangaphakathi oya kuthi ekugqibeleni ujongane nazo. Iimpompo ezingabizi kakhulu zihlala zisebenzisa isiqu sokuphakamisa ukuvula nokuvala ivelufa. Ngolu luyilo, isher washer ezantsi kwesitshixo sevalve iya kunxiba ngokukhawuleza kwaye ekugqibeleni yenze indawo yokuhlambela itephu yombhobho yokuhlambela. Kwiimodeli ezintsha ezinepompo, ukhetho olungcono yiveluvu engenagasket. Ezi ziya kusebenzisa ii-discs zeceramic kunye neekhatriji ze-inki kwaye kubonakala ngathi lukhetho oluthandwayo kwiipompo zangasese kunye nebhafu kunye neenjongo zokuhlamba. Ngenxa yokuba akunakulindeleka ukuba zivuze njengeompompo zevalvefa zokucinezela, ekugqibeleni uza kufumana itampu yokuhlambela yomelele ngakumbi ngaphandle kokuvuza.
Uhlobo kunye nombono webhobho yamanzi
Nangona ulwakhiwo lwangaphakathi lwetampu yegumbi lokuhlambela lubalulekile, ukubonakala kompompo kucacile kubo bonke. Yinxalenye ebalulekileyo yombhobho wokuhlambela. Iimpompo zegumbi lokuhlambela ziza ngeendlela ezahlukeneyo, ukusuka kwifashoni yale mihla ukuya kuyilo lwakudala lweantiki. Isibambo siphatha uluhlu ukusuka kumanqanaba okujija okanye iincakuba zesihlahla ukuya kwiipompo zebar ezithe tye ezilula ezisetyenziswa ekhitshini kuphela. Iinqumlo kunye nezibambo ezinqamlezileyo lolunye utshintsho ekufuneka luqwalaselwe. Unyango lomphezulu wesinki yokuhlambela yeyona nto inomtsalane kwiyunithi yompompo. Abavelisi baneendlela ezahlukeneyo, kwaye i-chromium yenye yezona ndlela zithandwayo. Ukuba ujonga itephu yasimahla yokugcina amanzi, itephu ye-chrome eya kuba yinto elungileyo kuba akukho lula ukuvelisa amabala amanzi. Iimpompo zokuhlambela ngobhedu ziyathandwa njengeplating ye-chrome, kwaye imigaqo yokudaya isebenza kulondolozo lwetampu. Ikhithi yokuhambisa umbhobho ophakamileyo ephezulu ineengubo eziphuculweyo ukuze ikunike ukungangeni manzi, ukungqinisisa kunye nokukrwela ukunganyangeki. Umenzi unikezela nge-alloy ye-tin, i-nickel kunye nobhedu njengezona zigqibeleleyo zigqityiweyo, kunye nokupholishwa, ukugqitywa kunye nokugqitywa kwamatte. Ukugqitywa kweMatte emnyama kuye kwahluka kakhulu kwaye kuhle, ke ungoyiki ukuzama ukubonakala okutsha. Nokuba yeyiphi na isitayile sokuhlambela ofuna ukusifezekisa, kuyakubakho itepu yesinki yokuhlambela ukongeza umhombiso wakho wokuhlambela.
Ubuchule bokubhalela itephu yegumbi lokuhlambela
Xa ucwangcisa isitayile kunye noyilo lwegumbi lokuhlambela kunye nendawo yokuhlambela itepu efanelekileyo kwisicwangciso sakho, soloko uzama ukuqwalasela ibhafu kunye neshawari yezixhobo zompompo wesinki njengomxholo. Unokuhombisa ngezinye izinto, ezinje ngezibambo zokubamba, izibambo, iitawuli zeepilisi kunye neerali zephepha langasese, kunye nezitya zokuchitha iphepha. Ukuba ujonga ngeenxa zonke, uyakufumana iikiti ezipheleleyo zokuhlambela, okanye ungakhetha ukudibanisa kunye nokutshatisa-hlala nje kumxholo wentambo yentsimbi, ukuze umhombiso udade kakuhle.
Ngaphambili :: Ukufumana u-plumber kunye neengcebiso ngemibhobho yokunciphisa ukusetyenziswa kwamanzi next: Iipompu zegumbi lokuhlambela leNickel eliCociweyo-Ukhetho olufanelekileyo kuwe